समाज Archives - Janakhabar
काठमाडौं । आज बिहान महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरस्थित कारागारमा एक कैदीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा महोत्तरीकै लोहारपट्टी नगरपालिका–१ का ८० वर्षीय राजकरण यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय भोग्दै गरेका यादव बिहान २ बजे एक्कासी बेहोस भएका थिए । उपचारका […]
काठमाडौं । सिरहा, लहानस्थित रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारकका (राउ) स्मारक अस्पतालमा कार्यरत नायब सुब्बा बासुदेव महतो अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार र अश्लील गाली गरेको आरोप लागेको छ । सोही आरोपमा नायब सुब्बा महतोलाई पक्राउ गरिएको हो । सेवा सुस्त भएको भन्दै एक सेवाग्राहीले नासु महतोसँग गुनासो गरेका थिए […]
काठमाडौं । भक्तपुरमा आज विहान टिपरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सुर्यविनायक आदर्श सडक खण्डमा काठमाडौंबाट जगातीतर्फ जाँदै गरेको बा ७९ प ७८७६ नम्बरको मोटरसाइकललाई बा ४ ख ५२९८ टिपरले ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छैन । ठक्कर दिने टिपर र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ […]
कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुटाउनेलाई जरिवाना !
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न आग्रह गरेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी उत्पादनकर्ताकै भएकोले कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि बेग्लाबेग्लै दिन फोहोर संकलन गर्न गाडी पठाइने महानगरको सूचनामा उल्लेख छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए त्यहाँबाट फोहोर नउठाउने पनि महानगरले बताएको छ […]
नेपाल प्रहरीका १७ एसएसपी डीआईजीमा बढुवा
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका १७ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ । बुधबार राती गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले उक्त सिफारिस गरेको हो । बढुवा हुनेको सूचीमा ४ जना महिला एसएसपी समेत रहेका छन् । अन्यमा बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल […]
न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको अडियोबारे छानविन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियशनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारका निवर्तमान अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको अडियो सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । बारले न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङलाई घरौटीमा रिहा गर्नका लागि मोलमोलाई गरिएको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको […]
काठमाडौं। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस । मानव जीवनका लागि योग भन्ने आह्वानसहित नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हरेक वर्ष जुन २१ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०१४ मा गरेको निर्णयअनुसार सन् २०१५ जुन २१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो। […]
जारको पानी पनि नक्कली !
काठमाडौं । प्रहरीले विभिन्न कम्पनीको ट्रेड मार्क प्रयोग गरेर पानीको जार बेचेको आरोपमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुको साथबाट १९७ वटा पानीको जार बरामद गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका आशिष कार्की र चितवनका किरण श्रेष्ठ रहेका छन् । यसरी अन्य कम्पनीको ट्रेडमार्क भएको पानीको जार विक्री गर्न प्रयोग गरिएका दुई वटा गाडीलाई पनि […]
सहिद कुमार पौडेल स्मृतिसभा सम्पन्न
काठमाडौं । महान सहिद कुमार पौडेलको चौथो स्मृति सभा सम्पन्न भएको छ । सभाका अध्यक्ष सहिद कुमार पौडेलका जीवनसंगिनी धन कुमारी खड्का पौडेल, प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सर्लाही, रौतहट इन्चार्ज मिसन शाही, अतिथिहरुमा सहिद कुमार पौडेलका बुबा खिलक राज पौडेल, आमा दुर्गा देवी पौडेल, छोरा कुशल पौडेल, सर्लाही जिल्ला सेक्रेटरी कमल सुस्लिङ्ग, […]
नेकपा धादिङको पाँचौं पूर्ण बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धादिङको पाँचौं पूर्ण बैठक नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने निर्णयसहित सम्पन्न भएको छ । असार ५ गते आइतबार जिल्ला सदरमुकाम धादिङवेशी स्थित पार्टीको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठक जिल्ला पार्टी सेक्रेटरी सिर्जनको अध्यक्षता सम्पन्न भएको थियो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज माइला लामाको प्रमुख आतिथ्यता, पूर्व […]